Bigul Online » जागिर : एक कारागार
Posted On : 24/01/2014 in कला/साहित्य |0Comment
भात खाने लतले राम्रैगरी गाँजेपछि मैले जागिर खान थालेँ । अहिले भात र जागिर दुवै कुराको अम्मल छ । आजकाल जागिरको दौडमा अमिलो पसिनाले गुम्स्याउँछ । पसिनालाई संसारकै महँगो अत्तर ठान्ने म यो बगिरहेको पसिना र अलमलिंदै बगिरहेको बागमतीमा खासै फरक देख्न छाडेको छु ।
एक दशक हुन लाग्यो जागिर खान थालेको । दश वर्ष लामै कालखण्ड हो एउटा व्यक्तिको जीवनमा । यो अवधिको आफ्नो जीवन र यात्राको उपलब्धि मापन गरेको छैन मैले । जीवन-यात्राको कुरालाई अलग्गै केलाउने हो भने, जागिरको आम्दानी र सफलता के कुरालाई मान्ने ? महिनैपिच्छे थापिने तलबलाई कि सुरक्षित हुँदै जाने भविष्यलाई ? म जान्दिनँ । सुरक्षित त खै कसरी भन्ने ! जहाँ टेकिरहेछु, कुन बेला भासिन्छु जस्तो लाग्छ । र पनि प्रिय छ जागिर । सास र धड्कनको अलंकार प्रियसीलाई लक्षित गरिन्छ भने मेरो प्रियसी नै जागिर बनेको छ । जागिर नगरे म बहुलाउँछु । पाएको र खाएको जागिर छाडे मानौं म मरिहाल्छु ।
रोजेको कारागार हो जागिर, मेरो निम्ति । निराशावादमा सास चुहाउनेहरु जन्मलाई नै हतकडी र नेल मान्छन्, पृथ्वीलाई कारागार सम्झन्छन् । म आफूलाई मुक्त पार्ने लालसाले जागिरमा जेलिंदै गएको कयौं पात्रमध्येको एक हुँ । हो त, कारागारमा खान पाइन्छ, बस्न पाइन्छ । बाथरुमको सुविधा पनि हुन्छ । तर, साँगुरो सुरुङको बाटो रै’छ जागिर भन्नु । पस्ने द्वार छ, फर्किऊँ भने मोडिने एक इन्ची ठाउँ छैन । मोडिने ठाउँ भन्नु एक घुस्सा साहस र जोखिम त हो । जुन जोखिम उठाउन हामी जागिरेहरुले सकिरहेका छैनौँ ।
मलाई अचेल जागिर र बिहे उस्तै लाग्छ । खाए पनि पछुताइने र नखाए पनि थकथकी लाग्ने । जागिर खाएर अहिलेसम्म कोही मान्छे ठूलो भएन (खास-खास सरकारी कारिन्दा बाहेक), बिहे गरेर पनि लोकलबाट कोही विकासीमा उक्लेन । जागिर अर्थात् नित्यकर्म । म जागिर खाइरहेछु ।
© 2008 - 3287 All Rights Reserved.